Qarax Khasaara Dhaliyay Oo Ka Dhacay Gobalka Baay. – Calamada.com
Qarax Khasaara Dhaliyay Oo Ka Dhacay Gobalka Baay.
Wararka laga helayo gobalka Baay ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay qarax culus uu ka dhacay qeybo ka mid ah gobalka Baay’iyadoona warar dheeraad ah ay kasoo baxayaan qaraxaasi.
Qaraxa oo loo adeegsaday miinada dhulka lagu aasa ee meelaha fog laga hago ayaa lala beegsaday kolanyo ka tirsan ciidamada Kufaarta Xabashida Itoobiya oo ku socdaalayay duleedka degmada Qansaxdheera ee gobalka Baay.
Dhawaaqa qaraxa waxaa si aad ah looga maqlay qeybo badan oo ka mid ah xaafadaha degmada Qansaxdheera iyo qaar ka mid ah deegaanada hoostaga degmadaasi oo qeyb ka ah goobaha Kufaarta Xabashida Itoobiya duulaanka kaga sugantahay gobalada Baay iyo Bakool.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in qaraxa uu sababay khasaara baqti iyo dhaawac ah oo ciidamada Kufaarta Xabashida Itoobiya kasoo gaartay qaraxaasi’iyadoona qaraxan uu imaanaya xilli maalin ka hor qarax ka dhacay duleedka degmada Rabdhuura ee gobalka Bakool lagu gubay gaari dagaal islamarkaana lagu dilay tiro askar Itoobiyaan ah.
Previous: Dhageyso Warka Subax Ee Andalus 05-10-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 05-10-1437 Hijri.